UZodwa wabantu uthi kukhulu okuzayo, abantu ababekephansi umoya | isiZulu
Durban - Bebejika kusho ukuphuka izintamo abantu ebebehambele umcimbi wamahhashi iVodacom Durban July ngoMgibelo, uZodwa Wabantu efake ingubo emnyama eveza lonke ithanga kubonakala ukuthi alibonwa nhlobo iphenti.
UZodwa ungomunye wabantu ebebelindelwe kakhulu kulo mcimbi etendeni laseYadini njengoba bebeqala ukuba yingxenye yomcimbi.
Kume yonke into etheleka abantu bemlandela bemushutha ngemuva futhi engenankinga.
UZodwa uthe ubathanda kabi abalandeli bakhe njengoba engabaphoxanga futhi engenankinga yokuthi bayamlandela befuna ukuthatha izithombe naye.
“Mina ngingumuntu wabantu negama lami liyasho, abantu bebelindele mina kakhulu futhi bengingeke ngikwazi ukubaphoxa. Ngibonile ukuthi ingubo yami bayithandile kakhulu, nangonyaka ozayo basazongibona futhi bazobona okhulu kunalokhu.
"Yize abanye bengixeka akunankinga, ngifuna abantu besifazane bazithande baziphilele, sebenzisa onakho ngamandlla akho. Ngivukile ngagcoba uvaselina, ngazigqokela ingubo yami engiyithandayo, abantu abayeke ukugxeka uZodwa Wabantu," kusho yena.
Kulo nyaka amatende abeqala ngqa ukuba kulo mcimbi nawo ahlomule lukhulu njengoba abegcwele mfi. Phakathi kwamabhizinisi abeqala ukumisa amatende lapha kubalwa iYadi, iKaledoScope elixhaswe yiNdalo Media kanti bekuhleli kulo uBoity Thulo futhi yitende elithandwe kakhulu abathandi benqephu njengoba bekukhangiswe kakhulu imfashini.